ITIAVANA NY NAMANA NY FINOANA | FJKM Amboniloha
ITIAVANA NY NAMANA NY FINOANA
Hoy Jesoa : « Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hiankatiavanareo; eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavako anareo kosa. Izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro hianareo, raha mifankatia. » (Jao.13, 34.35)
Tsy hoe didy fe didy fotsiny io nambaran’i Jesoa io fa misy lojikany: rehefa tena resy lahatry ny fitiavan’Andriamanitra Izay nanolotra ny ainy ho fanavotana anao mantsy ianao dia mitoetra ao amin’izany fitiavany izany. Io fitiavany io no mandrisika anao hitia ny hafa tahaka izay efa nitiavan’i Kristy anao. Tsy azo sarahina eo amin’ny fiainan’ny mpino araka izany ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. “Izay tia an’Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny…Raha misy manao hoe: Tia an’Andriamanitra aho, nefa mankahala ny rahalahiny, dia mpandainga izy;” (1 Jao.4, 21.20)
Tsy fitiavana amolotra fa natao hampiharina eo amin’ny andavanandrom-piainanao ny fitiava-namana…..ao an-tokantrano sy eo amin’ny fiarahamonina, any am-piasana sy any am-pianarana…Manome ohatra vitsivitsy momba izany ny Soratra Masina:
Aoka tsy hamihina ny soa amin’izay tokony homena azy (Oha.3, 27…);
Raha mampiakatra vokatra ianao (fambolena) na karama dia aoka hamela sisa ho an’ny tsy manana (Lev.19,8-18);
Aoka tsy hizaha tavan’olona (ohatra izay heverina fa hahazoana tombontsoa ihany no arahabaina sy anaovan-tsoa) (Mat.5, 43-48);
Aza manisy ratsy namana fa “ny fitiavana tsy manisy ratsy namana” . “Aza mety ho resin’ny ratsy ianao fa reseo amin’ny soa ny ratsy” (Rom.13,10; 21, 21);
Miraisa hina mitondra ny olan’ny namana ho eo amin’i Jesoa Kristy handraisany Famonjena fa tsy mifosafosa na mitsetsetra fotsiny (Lio.5, 17-26);
Izay rehetra ataonao dia ataovy toy ny ho an’ny Tompo. Tsarovy fa mihatra Aminy izay ataonao amin’ireny madinika ireny (Mat.25, 31-46);
Koa miantso anao ny Tompo Jesoa ankehitriny: IALAO, ATSAHARO fa fahotàna ny fizahan-tavan’olona, ny fankahalàna namana, indrindra ny fihatsarambelatsihy ka mihevitra izay hamandrihana, haminganana na handavoana ny namana. Isika Kristiana mpanara-dia an’i Kristy mihitsy anie no ambara amin’izany e!
Raha ny Kristiana izay heverina fa maro anisa no tena mijoro miaina ny fitiava-namana marina ambaran’ny Soratra Masina dia handroso sy ho feno fiadanana sy fahasambarana ny firenentsika. Koa raiso àry ny andraikitra, tohero ny fampisaratsarahana ataon’i Satàna, miraisa hina, mifankatiava, mifanasoava raha mbola velonaina koa. Aza matahotra fa momba anao Jesoa!